Version 0.9.9.0 – Mpiasa 'izao tontolo izao – mampiray!
Mey 1, 2016 amin'ny tolotra 8 Comments
Fa ny voalohany ny May, ny iraisam-pirenena ny andro mpiasa no farany namoaka ny tena ela loatra izany ary mialoha dikan- 0.9.9.0.
Inona no dikan io tsara ho an'ny?
Voalohany – fanohanana ny Baidu, fikarohana goavana ny Shinoa, izay manana fandikan-teny ihany koa ny maotera, miaraka amin'ny fanohanana ny Kantone izay fa miavaka noho izany maotera. Zava-tsoa iray hafa dia ny hoe amin'ny maotera ity, vohikala izay nampiantrano any Shina afaka mahazo miditra amin'ny fandikan-teny miasa maotera.
Faharoa – efa raikitra ny amin'izao fotoana izao tsy dia manan-danja na fanohanana ny Google sy ny Yandex, ka raha ny marina dia tokony hiasa izy ireo indray izao. Koa raha misy pejy vitsivitsy ao an-toerana dia tsy nadika, Natao dika ny vaovao anao voasarona. Fiteny vitsivitsy no nanampy tao amin'ny dingana.
fahatelo – maro ny fanovana, fanampiny sy ny bibikely fanamboarana manodidina. Eny, mila manamboatra ny antontan-taratasy sy FAQ ho an'ny sasany.
Nahoana no mbola mamaky ity? Just hanatsarana ankehitriny, ary ny asa rahampitso!
Webbing Barcelona milaza
Mey 11, 2016 amin'ny 4:09 am
Perfect misaotra betsaka! Izahay niandry tsy amim-paharetana vaovao io dikan-🙂
Mey 13, 2016 amin'ny 1:50 am
Great! efa upgraded.
Misaotra anao noho ny asa mafy.
Mey 21, 2016 amin'ny 7:24 aho
Toa tsara. Misaotra anao.
Quick fanontaniana: ny mpizara dia nametraka Opcache, mpanao ary miasa. Ho avy ny fanafahana diritti Transposh fanohanana Opcache?
Mey 24, 2016 amin'ny 5:58 am
Opcache Tsy mpampiasa cache, fa misy mpampiasa teny cache isika fa mahafantatra ny (APC, APCu, xCache) dia manohana.
Aogositra 19, 2016 amin'ny 9:28 am
Fantatro izany satria plugin ~ 2010, fa tamin'ny voalohany dia lasa nandeha hamonjy WPML araka izay nihevitra fa matihanina kokoa… (tsy ao amin 'ny ligy araka ny Transposh, WPML Tsy mandeha ho azy)
Tsy dia I kokoa diso… WPML indraindray manan-danja nanana bibikely (Aho mampiasa azy amin'ny Ndao mihoatra ny 20.000 nitsidika ny andro) ary indray mandeha WordPress dia baovao amin'ny endriny vaovao, bibikely tsy fantatra izay nitandrina ny toerana ivelan'ny aterineto dia ferana amin'ny alalan'ny WPML in about 10 andro… Tsy manam-bola lava be toy izany ny fotoana fiandrasana, tahaka ny fifamoivoizana dia tena voajanahary ary Google no tena matotra momba ny haka aina amin'izay…
Transposh dia tsy misy isalasalana fa ny tsara indrindra translation plugin, na dia tsy tonga lafatra, fa faran'izay tsara ary voakarakara tsara.
Aogositra 26, 2016 amin'ny 1:06 am
Ny iray amin'ireo tsara indrindra afaka Translation Plugins sy Raha ny hevitro ny tsara indrindra.
Tsy mety ho fanatsarana sasany ohatra slug fandikan-teny ary ny sasany handika ny olana mifandray amin'ny kofehy azo raikitra.
Ity no toerana tena translation plugin.
Aogositra 26, 2016 amin'ny 9:45 am
Havent mbola nampiasa azy io, fa ny zava-misy fa manaiky Baidu dia mahatahotra. Tsy azo antoka tsara ny hatsaran'ny fandikan-teny dia ny Baidu oharina amin'ny Google.
Ka ny tsara ihany fa mampiasa Baidu for Shinoa, sy langilangy amin'ny Google na aiza na aiza-kafa.
Novambra 7, 2016 amin'ny 12:16 am
Misaotra anao 🙂 noho ny asa mahafinaritra
Tapakila #328 (svn repo) mihidy Jolay 1, 2018
Tapakila #328 (svn repo) namorona Jolay 1, 2018
Changeset amin'ny Transposh-WordPress [7ef2701]: Zavatra in Full Version tokony hijanona ao Full Version Jona 27, 2018
Changeset amin'ny Transposh-WordPress [97c2380]: v1.0.1 famotsorana antomotra Jona 27, 2018
Changeset amin'ny Transposh-WordPress [5b45805]: Avelao Loading ny gadget avy amin'ny fampidiram-pejy / Transposh / gadget, ilaina ho an'ny ... Jona 19, 2018
kismet amin'ny Version 1.0.0 – Tonga ny fotoana